Palestina: Ny hirifirin’ny sesitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2010 15:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, বাংলা, Italiano, Español, Swahili, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny sambo Al-Amal (“Fanantenana”) tohanan'i Libia hitondra fanampiana dia saiky hiantsona tao an-tsisin'i Gaza ( saingy voatery niova lalana nankany Ejipta). Tao Gaza, i Kalam, mpitoraka blaogy, nieritreritra olona iray ary naniry mba ho isan'izay tany anatin'ilay sambo:
Nisalotra voaly fitondra mivavaka izy ary nitàna rojom-bavaka (sapile) teny an-tànany, sady mangataka amin'Andriamanitra – na angamba mamerina fotsiny ny fihetsika hitany ataon'ireo raiamandreniny rehefa tojo zava-tsarotra izy – miantso an'Andriamanitra hanatanteraka ny faniriany izy na ny marimarina kokoa ny fanirian'ny renibeny hahita azy sy hamihiana ary hanoroka azy.
Indro i Hala, izay tsy mbola nandia akory ny faha-herintaona niainany, nefa dia mitondra ny fihetseham-po lovain'ny Palestiniana tsirairay voasesitany. Zanaka vavin'ny mpitsoa-ponenana iray izy, izay tsy mbola nahita velively na dia sentimetatra iray amin'izay taniny akory aza nandritry ny fiainany manontolo, ary avy amina reny izay miaina miaraka amin'ny fo mizara roa eo anelanelan'ny tanindrazany sy ny firenena vahiny (mampiantrano azy), eo anelanelan'ny fianakaviany sy ny tokantranony, eo anelanelan'ny reniny sy ny tranony, eo anelanelan'ireo mpiray tampo aminy sy ny ankizy. Ny fanahiny sy ampahany betsaka amin'ny fony no any, ary ny ankohonany sy ny ampahany sisa amin'ny fony sy ireo fahatsiarovany no eto.
Manohy i Kalam :
Zazavavikely zanaky ny mpiray tampo amiko i Hala izay monina any Libia ary tsy afaka mankany Gaza – izay ifantohan'ny sain'ny rehetra amin'izao andro izao. Mivavaha amin'Andriamanitra ary mangataha aminy mba hamela azy ho any Gaza… Tsy afaka mankany izy noho ny fahasarotan'ny fakàna taratasy fanamarinam-ponenana any Libia, izay midika fa tsy ho azony atao ny hiverina any amin'ny misy ny rainy izay olona nafindra monina – tsy manana laharam-pamantarana akory – sy any amin'ny misy ny sisa amin'ireo fianakaviany. Miatdy olona iray hiteny aminy i Hala hoe, “Tongasoa eto amin'ny taninao”, ary mitady olona afaka hametraka azy ho takatry ny fihina feno fitiavan-drenibeny, izay tia be ery ny sary sy ny video ahitàna azy.
Feno fanantenana i Hala eo ampiandrasana, fanantenana iray goavana be noho ny sambo Libiana tonga aminay eto, izay tena iriko indrindra ny mba haha-isan'izay eny amboniny azy ka ho azoko atao ny hamihina azy; rehefa tonga ary zareo dia hitako eny amin'ny endrik'izy ireny tsirairay avy ny kasinga kely amin'ny sarin'i Hala, ary dia hanontany azy ireo aho ny antony tsy nitondran-dry zareo an'i Hala hiaraka taminy.
Ao Gaza ihany koa, i Kawther Abu Hani mihaino an-dreniny mahatsiahy:
“Mba tiako loatra ny hahafantatra izay niafaran'ilay tranokelintsika nilaozantsika ao Nazareta efa herintaona lasa izao… Mba toy inona izao ny endrik'ireo havoana ankehitriny? Ary angamba na ny fofon'ny dità (thym) aza niova… Mba nahatratra firy taona ireo namako, ary izaho izao efa lasa anganongano ho an'ny taranak'izy ireo sisa… Andriamanitro ô, tsy mba nanotrona akory ny fampakarambadin-dry zareo aho. Satriko ery ny hiaina ny dingam-piainako rehetra miaraka amin’-dry zareo, ary izay nandrasako indrindra tamin'ny rehetra dia ny andro nianaranay ny amin'ny fitiavana sy nanadinoana ireo lalao, nony resim-pitiavana izahay nahatonga anay hatrany amin'ny fahadisoam-panantenana. Andraikaky ô, fa ny aretim-pitiavana tsy mbola mitovy amin'ny aretina ateraky ny fibodoana tanin'olona [ ataon'ny israeliana]. Tsaraoako ankehitriny…” Ary dia mitohy mahatsiaro hatrany izy.